हामी कम्प्युटर र डिजिटल उपकरणहरू को युगमा बाँचिरहेका छौं। तिनीहरूले हामीलाई चारैतिर छन्, र हामी तिनीहरूलाई बिना मेरो जीवन कल्पना गर्न सक्दैन। कम्प्युटर, ल्याप्टप, पाटी, स्मार्टफोन, फोन नम्बर - उपकरणहरू लाखौं तपाईं आफ्नो सुरक्षा को हेरविचार छैन भने धेरै कमजोर हुन सक्छ। यो समय बारेमा यो रक्षा ट्याब्लेट लागि एन्टी-भाइरस छ कुरा गरौं।
भाइरस के हो? यो एउटा सानो कोड तत्काल कम्प्युटर नेटवर्क मार्फत फैलाउने र त्यसपछि उपकरणहरू लाखौं विश्वव्यापी infects। पहिले यदि यो पीसी र नोटबुक मा मुख्य रूप केन्द्रित, तर अब जवान भाइबहिनीहरू लागू हुन्छ। एन्ड्रोइड ओएस आधारित उपकरणको सुविधाहरू, संख्या, जो को बढ्दै छ exponentially। यस कारण, आवश्यक ट्याब्लेट र साईट र अनुभव प्रयोगकर्ताहरूको लागि एन्टिभाइरस।
के यी उपकरणहरूमा भाइरस लेखकहरू ब्याज कारण? तिनीहरूले मालिक महत्त्वपूर्ण र व्यक्तिगत जानकारी बिलिङ जानकारी सहित धेरै भण्डारण भन्ने तथ्यलाई। .. सबैभन्दा आधारभूत आवश्यकताहरु - अब को लागि, इन्टरनेटको मद्दत संग एन्ड्रोइड ट्याबलेट लागि यस सन्दर्भमा पैसा स्थानान्तरण, आदि, विरोधी-भाइरस बाहिर लेनदेन खरीद र बिक्री धेरै जान्छ। एक मिनी-कम्प्युटर किनेको - यसको सुरक्षा हेरविचार, र त्यसपछि अन्य कार्यक्रम स्थापना गर्नुहोस्।
एकै समयमा, एन्टिभाइरस सफ्टवेयर स्थापना ट्याब्लेट लागि, निश्चित केही सरल नियमहरू पालन गर्न हुन:
यो सफ्टवेयर निर्माता वेबसाइटहरूबाट - यो कडाई सिद्ध साइटहरु संग डाउनलोड, मनमोहक।
लाइसेन्स उत्पादन, र सधैं पूर्ण भुक्तानी संस्करण स्थापना गर्न निश्चित हुनुहोस्।
आवश्यक भएमा नियमित, भाइरस डेटाबेस अद्यावधिक र, र कार्यक्रम नै। यो सेट अप उचित छ स्वचालित अद्यावधिक र यो मुद्दाको बारेमा बिर्सन्छन्।
समय समयमा भाइरस लागि उपकरण स्क्यान गर्नुहोस्।
तपाईं ट्याब्लेट मा एक एन्टिभाइरस आवश्यक छ भने, पहिले इन्टरनेटमा तिनीहरूलाई बारेमा समीक्षा पढ्नुहोस्, विशेषज्ञहरु परामर्श निःशुल्क परीक्षण संस्करण भनेर विकासकर्ता साइट बाट डाउनलोड गर्न सक्छन् प्रयास गर्नुहोस्। र त्यसपछि मात्र निर्णय। आखिर, यो वास्तवमा आफ्नो उपकरण, तपाईंको जानकारी पनि कोष को सुरक्षा मा निर्भर गर्दछ।
एन्टी-भाइरस को विकल्प विशाल, दुवै भुक्तानी र निःशुल्क। पहिलो, तपाईं भुक्तान संस्करण आवश्यक कि निर्णय। यो तपाईं आफ्नो ट्याब्लेट मा के मा निर्भर गर्दछ। यो पर्याप्त हुनेछ सम्भव छ, र नि: शुल्क संस्करण। किन पैसा खर्च, तपाईं मात्र पुस्तकहरू पढ्न भने, चलचित्र, समाचार, हो मौसम पूर्वानुमान हेर्न? आधारभूत उपचार अझै पनि उपलब्ध हुनेछ। गोप्य र वित्तीय जानकारी राम्रो भण्डारण को मामला मा बाहिर काँटा गर्न।
अक्सर, ट्याब्लेट लागि एन्टिभाइरस सफ्टवेयर छनौट, त्यहाँ के सबै भन्दा राम्रो फिट बारेमा प्रश्न छ। छनौट तिनीहरूलाई प्रत्येक आफ्नै तागत र कमजोरी, लाभ र बेफाइदा छ किनभने, गर्न सजिलो छैन। एक धेरै सुरक्षा आवश्यकताहरु लागि आवश्यकताहरु मा निर्भर गर्दछ। जसको लागि तपाईं एक एन्टिभाइरस, खतराबाट जोगाउन पर्छ के बाट आवश्यकता हो, क्रममा निर्णय सबै को पहिलो।
सबै भन्दा राम्रो ज्ञात निम्न छन्: Kaspersky, को को AVG एन्टिभाइरस, Dr.Web को, Avast मोबाइल सुरक्षा को। तर यो धेरै अन्य रूपमा कम चिरपरिचित, केही भन्दा अझ राम्रो, के कुरा गर्दैन बारेमा अझै पनि छ। फेरि एक पटक - विकल्प तपाईंको हो, तर तपाईं यो निश्चित र सकेसम्म छिटो बनाउन छ।
कम्प्युटर भाइरस को विशिष्ट सुविधाहरू कुनै पनि संकेत हो?
वस्तु आवेदन डाटा: यो फोल्डर के हो र किन आवश्यक छ?
PUP.Optional - यो भाइरस र कसरी यसलाई हटाउन के हो? पप परिवार भाइरस। विज्ञापन भाइरस
मेगा ब्राउज कसरी आफ्नै हटाउन? मेगा हात ब्राउज मुक्त हटाउन
Tencent कसरी आफ्नो कम्प्युटरबाट हटाउन?
म किन ल्यापटप मा तामा सिक्का राख्न आवश्यक छ?
सही उत्पादन गुणस्तर आश्वासन कत्तिको महत्त्वपूर्ण छ?
घर वरिपरि अन्धो क्षेत्र
बिरालो-shifters - नयाँ नस्ल: विवरण, फोटो
Tiramisu लागि बिस्कुट
परीक्षण व्यञ्जनहरु - Salting टमाटर
किन बिरालोहरु whiskers? तपाईं एक बिरालो गरेको whiskers के भन्छौ?
ब्रेसहरू: प्रकार र वर्गीकरण
स्मार्टफोन सैमसंग ग्यालेक्सी J1: निर्दिष्टीकरण, निर्देशन, समीक्षा